Y Promo | YTV
Home » Y Promo
Y Promo Program...!
သင့်လုပ်ငန်းမှာ အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ သင့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကြော်ငြာတွေပါ...
ဒီတော့ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ထည့်သွင်းဖို့ Platform တစ်ခုကို လိုက်ရှာနေပါသလား...?
ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ YTV Channel က ထုတ်လွှင့်မယ့် Y Promo အစီအစဉ် နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ...
ကျွန်တော်တို့ Y Promo ဟာဆိုရင် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို YTV Channel ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးဆီကို တိုက်ရိုက်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်မယ့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်...
ပရိတ်သတ်ကြီးအနေနဲ့လည်း Y Promo အစီအစဉ်ကို အားပေးကြပါဦး…
လက်ကျန် ၃ ပွဲအလို နည်းပြကို ထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ ဘက်တစ် အသင်း………..
ဘက်တစ် အသင်းဟာ ဒီရာသီ စပိန်လာလီဂါ လက်ကျန် ၃ ပွဲအလိုမှာ သူတို့ အသင်း နည်းပြ ရူဘီဖာရီယာကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်….. စနေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဘက်တစ် အသင်းဟာ ဘီဘာအိုလ် အသင်းကို ...
ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်တွေ ပြန်လည် စတင်နေ……….
ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ကနေ ပြန်လည် စတင်နေပြီလို့ သိရတာပါ……….. အသင်း ကစားသမားတွေနဲ့ နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ လေ့ကျင့်ရေး မတိုင်မီ ၂ ရက် အလိုမှာ ဆေးစစ်မှု ခံယူခဲ့ပြီး COVID-19 ...
ပေါ့ဘာကို ခေါ်ယူဖို့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် လက်လျှော့ပြီ…………
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်း အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကာလရှည် ပစ်မှတ် ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာကို ခေါ်ယူဖို့ လက်လျှော့လိုက်ပြီလို့ သိရတာပါ……. ပေါ့ဘာဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းမှာ အနာဂတ် မရေရာသလို ဥရောပ ကလပ် ...
Tueday TV Guide (12.5.2020)
12 May 2020ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ ပြည့်နှစ် သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၅၆၄ ပြည့်နှစ် ကဆုန်လဆုတ် (၆)ရက် အဂါင်္နေ့ 07 : 00 AM ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား (အပိုင်း-၂) တရားတော် (New) 07 : 50 ...
ပြင်သစ်ဧည့်လမ်းညွှန်နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ဒေသခံတွေကို (၁၄)ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးနောက် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် တဲ့အတွက် ပြန်လည်စေလွှတ်………
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးမြို့နယ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူ လူနာအမှတ်-၈နဲ့ အနီးကပ်ထိ တွေ့ခဲ့သူ (၉၁)ဦးကို ဧပြီလ(၃)ရက်နေ့က စောင့်ကြည့်ရက်(၁၄)ရက်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ၎င်းတို့ရဲ့ နေအိမ်ကို ပြန်လည် စေလွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်…… COVID-19ရောဂါရှိသူ ပြင်သစ်ဧည့်လမ်း ညွှန်နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ဒေသခံ(၉၀)ကျော်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ...
Sunday TV Guide (29.3.2020)
29 Mar 2020ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ပြည့်နှစ် သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၅၆၃ ပြည့်နှစ် တန်ခူးလဆန်း ( ၆) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ 07 : 00 AM မေတ္တာ နှင့် ဥပက္ခာ တရားဒေသနာတော် အပိုင်း(၁)(New) 07 ...